Sanding Caps Factory - Shiinaha Sanding Caps Manufacturers, Alaab -qeybiyeyaasha
Si aad ula shaqayso daboolka ciidda
Waxyaabaha: Birta, Rubber
Cabbirka: 5*11mm /7*13mm /10*15mm /13*19mm /16*25mm
Muunad bilaash ah Sanding cap for Manicure Pedicure #80 #120 #180
★ Baaxad weyn: si loo daboolo baahiyahaaga shiidi kala duwan. Nooca iyo cabbirku waa qiyaastii 16 x 25 mm/0.6 x 1.0 inji, si sahlan loo rakibi karo loona saari karo, aadna ugu habboon in la isticmaalo. Waxay dabooli kartaa baahiyaha farshaxanka ciddiyaha kala duwan iyo waqtiyo badan oo khuseeya.
★ Qalabyada ciddiyaha ee xirfadda leh: go'an oo si gaar ah loogu talagalay tababbarka ciddiyaha ayaa dabooli kara baahiyahaaga. Awood sare, wax -ku -oolnimo sare, saamayn wanaagsan, nolol adeeg dheer, fududahay in la isticmaalo, ammaan ah oo la isku hallayn karo. Dusha ciidda waxaa loo isticmaalaa in lagu dhajiyo dusha aan sinnayn ee ciddiyaha. Waa mid waarta oo sahlan in la hawlgalo.
★ Suunka nadiifinta ciddiyaha: ku habboon farsamaynta farsamooyinka, muraayadda, caagga, birta, dhagaxa, dhoobada dhoobada, dhoobada, iwm. Si gaar ah ayaa loogu talagalay nadiifinta iyo hagaajinta ciddiyaha, ilaalinta ciddiyaha oo qurux badan oo hagaagsan.
★ Qalabka wax-soo-saarka oo tayo sare leh: Waxaa laga sameeyay agab tayo sare leh oo raagaya, adkaysi leh oo adkaysi u leh. Saameyn qumman oo qumman, hufnaan shaqo oo sareysa iyo nolol adeeg dheer. Isticmaal ciid wanaagsan oo tayo sare leh, ciid aan sahlanayn in la dhaco, waxaad u isticmaali kartaa sidaad doonto.
★ Si sahlan loo qaadi karo: culeys fudud, cabbir yar, fududahay in la kaydiyo oo la qaado, ayaa kaalmo weyn siin kara shaqada manicure. Waxa kale oo jira midabyo badan oo laga dooran karo, casaan, buluug, bunni, cas, iyo cagaar.
Miisaanka Appr. Miisaanka: 250g/sanduuq (100pcs)
Qalab: maro/caagag gadaashiis
Dahaadhka: Midabka Purple
Daboolka Cagaaran ee Cagaaran
Dahaadhka: Midabka Cagaaran
Furka buluugga ah ee buluugga ah
Dahaadhka: Midabka Buluugga ah
Jaalaha Sanding Cap
Dahaadhka: Midabka Jaalaha ah
Koofiyadda Sanding Red
Dahaadhka: Midabka Cas
Furka Madow ee Madow
Daahan: Midab Madow
Daboolid: Midabka Pink
Dahaadhka: Midabka Orange
Koofiyadda Cad Cad
Dahaarka: Midabka Cad
Dahaarka: Midabka bunni